लुम्बिनीका चार सांसद निलम्बनले जसपाको ’लफडा’ छताछुल्ल !! | सुदुरपश्चिम खबर
लुम्बिनीका चार सांसद निलम्बनले जसपाको ’लफडा’ छताछुल्ल !!
प्रदेशसभालाई संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले समेत चार सांसदलाई कारबाही गरिएको भन्दै निलम्बनका लागि पत्र पठाएका छन्। यादवलाई वैशाख ६ गते नै दलको नेताबाट हटाइएको थियो। (उपहार खबर बाट सभार)
एमाले सरकार जोगाउने विषय : विभाजनको डिलमा जसपा